Izindaba - 2020 unyaka othela izithelo zikaStamina, ngenhlanhla kanjani
U-2020 unyaka othela izithelo kuStamina, ngenhlanhla kanjani
Siqedile iphrojekthi enkulu evela e-Australia ngesikhathi, iklayenti lethu lenza umsebenzi wabo womhlangano manje. Bethule iphrojekthi entsha efanayo nathi ngaphandle kokungabaza ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, abaze baxoxe nganoma yimuphi umbuzo wezobuchwepheshe nathi, vele usiphonse imidwebo. Kubuye kube yisigubhu, kodwa ngesigamu sesilinda, isikhathi eside kakhulu. Onjiniyela bethu basenza uphenyo olunzulu ngemidwebo, uma bekwenza lokhu, badinga ukukhohlwa wonke amaphrojekthi adlule, ukugwema noma iyiphi inkinga noma ukuhlangabezana nenkinga. Ngemuva kokuxoxisana phakathi kwawo wonke umnyango ohlobene, sinquma ukuqeda lo msebenzi ezinyangeni ezimbili.
Ngasikhathi sinye, eminye imikhiqizo yethu yamakhasimende aseJalimane nase-USA aqediwe futhi yathunyelwa ngesikhathi, konke kwathola impendulo enhle.
Okukhiphayo kuphakama ngokungaphezulu kuka-200% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, ngaphandle kwenkinga yekhwalithi.
Isikali sethu sikhuliswa igxathu negxathu, siqasha abanye abasebenzi nabasebenza ngochwepheshe, siqashe indawo yokusebenzela eyodwa enkulu.
Siphinde wathenga umshini omkhulu lathe, can umshini ububanzi kufika ku 1200mm, ubude kuze kufinyelele 6m.
Ukuphumelela kwethu kudonse nohulumeni wasekhaya. Uhulumeni waseYantai FTZ unesibopho esikhulu, yonke iminyango isebenza kahle kakhulu. Iminyango ehlobene yafika kaningi ukuzotshala isimo sethu, izama ukusisiza ukuze sithole inqubekela phambili ethe xaxa. Sizizwa sibonga kakhulu.
U-GM Jerry wethu ubambe umhlangano kubo bonke abasebenzi, wethula isimo senkampani, wathi sibonga bonke abasebenzi, wasikisela ngohlelo lwethu lwekusasa, futhi wanquma ukunika ezinye izisebenzi inzuzo. UJerry wethula ukuthunywa kukaStamina futhi. IStamina kufanele isebenze njengenkampani enesibopho, ebhekele imvelo, ebhekele umphakathi, ebhekele abasebenzi.
Manje sethula umhlaba wokutshala imali futhi sizakhela eyethu indawo yokusebenzela.
Ithemba Ukuqina unekusasa eliqhakazile ngokwengeziwe!